देउवालाई पौडेलको कडा प्रश्न- सुतुरमुर्ग शैलीमा मुन्टो लुकाएर कति दिन हिँड्ने? - ramechhapkhabar.com
देउवालाई पौडेलको कडा प्रश्न- सुतुरमुर्ग शैलीमा मुन्टो लुकाएर कति दिन हिँड्ने?
जिल्लाबाट गुनासो लिएर सानेपामा कार्यकर्ता आउने तर नेताहरू त्यो ठाउँबाटै भागेपछि उनीहरूको गुनासो कसले सुन्ने भन्दै उनको प्रश्न थियो। यी समस्या कसरी टुंगो लगनउने? समस्या समाधान नगरी कसरी प्रस्ताव पास हुन्छ? पास पास मात्र भनेर हुन्छ?,’ पौडेलको प्रश्न छ।